Ka noho izany dia kely kokoa izany ny vola vahiny tafaverina an-tanindrazana, fa ny vola vahiny anafarana entana no betsaka lavitra, ka mampiakatra ny vidim-piainana izany, satria raha fanafody novidiana 10 euro tany ivelany izany no mitentina 10euro x 4 248.85ar = 42 488.50 ariary tapa-bolana lasa, dia voatery vidiana 10 euro x 4 322.06 = 43 220.60 ariary amin'izao.
Misy elanelana 43 220.60 - 42 488.50= 732.10 ariary amboniny izany ny vidin'ilay fanafody iray nafarana avy any ivelany.
Raha raisina eo amin'ny toe-karena ankapobeny, dia misy fitongilanana ny mizàna ny entana ahondrana any ivelany sy ny entana hafarana (Balance commerciale). Io ilay antsoina hoe deficit commercial.
1 - Ireo entana ahondrana any ivelany (Taona 2019):
- Sakafo samihafa: 3296.245 miliara ariary
- Vanille: 2080.064 miliara ariary
- Crevette: 318.034 miliara ariary
- Café: 960 miliara ariary
- Minerais: 854.840 miliara ariary
- Zones franches: 2723.150 miliara ariary
Totalin'ny entana nahondrana any ivelany 9552.241 miliara ariary.
2 - Ireo entana nafarana avy any ivelany (Taona 2019):
- Sakafo samihafa: 1849.340 miliara ariary
- Vary: 525.430 miliara ariary
- Siramamy: 216.518 miliara ariary
- Angovo: 2460.380 miliara ariary
- Fampitaovana: 2677.664 miliara ariary
- Simenitra: 220.080 miliara ariary
Totalin'ny entana nafarana avy any ivelany 14 204.341 miliara ariary.
Izany hoe ny fitongilanan'ny mizàna ara-barotra izany dia 14 204.341 miliara - 9552.241 miliara = 4 652.1 miliara ariary. Izany hoe efa mila hitovy amin'ny fampandehanan-draharaha teti-bolam-panjakana amin'ny ankapobeny, raha tsy jerena ireo vola nitrosaina na anamboarana fotodrafitrasa.
3- Fandaniana solika
Anisan'ny mitana toerana lehibe amin'ny sandam-bola ny fanafarana solika
Ny taona 2019 dia nahatratra 169 692m3 na 169 692 000litres ny lasantsy SP95 nafarana,
620 026 m3 na 620 026 000litres ny gazoala, ary 29 871m3 na 29 871 000litres ny solika fandrehitra, pétrole Lampant. Izany hoe mitotaly 1 116 540m3 ny solika nafarana. Nahitana fitomboany 3.9% izany miohatra ny taona 2018.
Ny vidiny kosa dia araky ny fifanarahana nataon'ny fanjakana nanomboka ny 20 jona 2019, heritaona lasa izay, dia na miakatra na midina ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tsy mihetsika ny vidin'ny solika eny amin'ny mpanjifa, ary dia manefa ny trosan'ireo mpampongady solika ny fanjakana. Ka 4100ariary ny litatry ny lasantsy SP95, raha 3400ariary ny gazoala, ary 2130 ariary ny solika fandrehitra.
(Loharano nakana ny tarehi-marika: Banky Foibe - Instat)